Su'aal talooyinka Diyaaradeed
1 sano 11 bilood ka hor - 1 sano 11 bilood ka hor #292 by JanneAir15
Hello! Waxaan su'aal ka qabto mar kale. Waxaan doonayaa A380 Airbus ah laakiin waxaa jira kuwa badan oo iyaga ka mid ah (payware iyo freeware). Waxaan jeclaan lahaa in la ogaado waa in oo ka mid ah ayaan ka heli. Wax macno ah ma waa payware ama freeware in alla inta way fiican tahay.
Oo haddii aad sidoo kale waxay leeyihiin dhibaatooyinka doorashada diyaarad wanaagsan waayo, markaas aad su'aal kuu soo diri halkan!
Waxaan mar hore mid ka mid kaas oo ah on this page helay. Laakiin weli waxaan qabaa hal su'aal ku saabsan diyaarad in. waxaad ku dari kartaa liveries caadadii leh?
Last edit: 1 sanad 11 bilood ka hor by JanneAir15.
1 sano 11 bilood ka hor #293 by Dariussssss
inaan sidoo kale waxaan la isticmaalayo mid ka mid ah in, iyo ma ahan oo dhan. Waxaan isku dayay si loo soo dajiyo liveries dheeraad ah, laakiin sabab qaar ka mid ah, waxaa la aan shaqayn ... malaha waxaan ahaa kuwa Daalimiinta ah ee wax.
1 sano 11 bilood ka hor #330 by Gh0stRider203
Dariussssss qoray: inaan sidoo kale waxaan la isticmaalayo mid ka mid ah in, iyo ma ahan oo dhan. Waxaan isku dayay si loo soo dajiyo liveries dheeraad ah, laakiin sabab qaar ka mid ah, waxaa la aan shaqayn ... malaha waxaan ahaa kuwa Daalimiinta ah ee wax.
Ma waxay ahayd inaad ka beddeli file aircraft.cfg iyo sidoo?
1 sano 11 bilood ka hor #332 by Dariussssss
Aan ku sameeyey, laakiin weli, naaftaadu ku rakiban lama kor u muujinaya ... Ma garanayo sababta.
1 sano 11 bilood ka hor #334 by JanneAir15
Waxaan qabaa inaan ogaado sababta. Diyaarad Si asal ahaan waxaa loogu talagalay FS9. Ma waxaad ka heli naaftaadu saxda ah diyaarad in? waan arkay bogga Project Airbus oo waxaa jira A380 for FS9 (isku diyaarad sida on this page laakiin waa lagu casriyeeyo FSX) sidaas oo kale ayaan hubin waxa samayn aad u leedahay in la sameeyo si ay u helaan liveries si fiican u shaqeeyo ma ihi. Waxaan isku dayi doonaa inaan sameeyo wax ka si aad u hesho liveries shaqeeyo ka dibna halkan sheegi.
1 sano 11 bilood ka hor #338 by Dariussssss
Raadinta weerarka, waxa uu. Isla halkan, mar kale isku dayi doonaa.
1 sano 11 bilood ka hor #339 by Dariussssss
Sidaas daraaddeed, waxaa aad u leeyihiin. Waxaan ahaa awoodaan si loo soo dajiyo naaftaadu ah oo wuxuu galay '' our '' A380 oo ay u shaqayso.
Habka ugu tahay inaad samayso waa this ... First, baadhidooda iyo download kaliya texture A380 aad rabto in aad rakibi. Waxaad ka heli kartaa wax badan oo iyaga ka mid ah ee Avsim. Ku rid folder texture galay folder PA A380, file furan iyo edit diyaaradaha .cfg. Hubi si aad u hubiso in texture jaanqaadi aad sim, kiiskan, FSX ah.
1 sano 11 bilood ka hor #342 by JanneAir15
Waayahay, mahad waxaan isku dayi doonaa in.
1 sano 11 bilood ka hor #343 by Gh0stRider203
JanneAir15 qoray: Waxaan qabaa inaan ogaado sababta. Diyaarad Si asal ahaan waxaa loogu talagalay FS9. Ma waxaad ka heli naaftaadu saxda ah diyaarad in? waan arkay bogga Project Airbus oo waxaa jira A380 for FS9 (isku diyaarad sida on this page laakiin waa lagu casriyeeyo FSX) sidaas oo kale ayaan hubin waxa samayn aad u leedahay in la sameeyo si ay u helaan liveries si fiican u shaqeeyo ma ihi. Waxaan isku dayi doonaa inaan sameeyo wax ka si aad u hesho liveries shaqeeyo ka dibna halkan sheegi.
qabsado wanaagsan! Anigu ma aan ka fekero in lol
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.344